2500 Maleeshiyaad ah oo lagu diyaariyay xuduudka Kenya si dagaal ay ugu soo qaadaan Wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka. | Halganka Online
2500 Maleeshiyaad ah oo lagu diyaariyay xuduudka Kenya si dagaal ay ugu soo qaadaan Wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka.
Xukuumadda dalka Kenya ayaa dhameystirtay diyaarinta Maleeshiyaad Somali ah oo waalidoontii lagaga xaday gobolka Woqooyi Bari Kenya kuwaasi oo la doonayo in ay dagaallo kusoo qaadaan Wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka iyagoo huwan magaca ”DKMG ah ee Somaliya.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in diyaarinta maleeshiyadaasi ay ka qeybqaateen shaqsiyaad aan la carabaabin oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka kuwaasi oo laga yaabo in ay soo hogaamiyaan duulaanka lala damacsan yahay Wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka.
Ilo wareedyadu waxay intaasi kusii darayaan in Maleeshiyada Somalida ah laga soo uruurinayay maalmihi u danbeeyay xeryo tababar fudud ay ku qaateen oo ku yaalla koofurta iyo Bariga dalka Kenya iyadoona fangareyntooda ay bixineysay safaaradda Mareykanka ee Nairobi.
Dhinaca kale waxaa jira wadahadallo u soconaya horjoogayaasha Maleeshiyada Axmed Madoobe iyo xubno kamid ahaa maamulkii DKMG ah ee Jubbooyinka iyo Gedo iyadoona wadahadalladaasi ay dhex dhexaadinayaan masuuliyiin Kenyaati ah iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolladaasi, kuwaasi oo doonaya in la isku biiriyo labada dhinac.
Xukuumadda Kenya ayaa cabsi xoogan ka qabta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ay rumeysan yihiin safafkooda in ay ku jiraan dagaaliyahano badan oo Kenyaati ah kuwaasi oo tacaaduf ka helaya gudaha dalka Kenya taasi oo hogaamin karta in dalkaasi ay kacdoono Islaami ah ka billowdaan.
« Maleeshiyaadka Qubuura Galeenka oo xalay dil fool xun ka geystay degmada Dhuusmareeb. Tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan Madaafiicdii shalay ay Shabaabul Mujaahidiin la dhaceen Xarunta Madaxtooyada Xilli xaflad socotay. »